वाम एकताः एमालेको बुइ चढेर देश कब्जा गर्ने यस्तो छ प्रचण्डको रणनीति
HOME » वाम एकताः एमालेको बुइ चढेर देश कब्जा गर्ने यस्तो छ प्रचण्डको रणनीति
मदन कोइराला , २० आश्विन २०७४
काठमाडौं। असोज १७ गते नेपालको राजनीति निकै तरंगित बन्यो। अचानक एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्तिबीच बाम एकता गर्ने सहमति भयो। चुनावी तालमेलको चर्चा भइरहेको भएपनि बाम एकता नै गर्नेगरी भएको तीन पार्टीबीचको सहमतिपछि मुलुकको राजनीतिमा नयाँ तरंग थपिएको हो। एकता गर्ने भनिएका पार्टी र नेतृत्वको पृष्ठभूमि विगतमा भएका घटनाक्रम र अभ्यासका आधारमा यो एकता कतिसम्म सम्भव छ भन्ने प्रश्न अहिले सबैभन्दा बढी चासोको विषय बनेको छ । यससँगै एकताका पछाडि कुन दल र नेताको के स्वार्थ छ भन्ने विषय पनि चर्चामा छ।
केपी ओलीलाई धोका दिएर कांग्रेससँग लपक्कै हुन पुगेका प्रचण्ड फेरि कांग्रेसलाई धोका दिएर उनै ओलीसँग टाँसिन आएका छन् ।
माओवादी सशस्त्र विद्रोह परित्याग गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि माओवादीको सबैभन्दा बढी आलोचक थिए– केपी ओली। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी उम्मेद्वारसँग पराजित भएपछि ओलीले माओवादीलाई खहरे खोलाको संज्ञा दिएका थिए। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनसम्म आइपुग्दा माओवादी खहरे खोलामा नै सीमित हुन पुग्यो। तर परिस्थिति कस्तो भइदियो भने माओवादीको समर्थनमा ओेली प्रधानमन्त्री बन्न पुगे।
तर त्यो सहकार्य लामो समयसम्म टिक्न सकेन। माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि ओली सरकार नौ महिनामा नै ढल्न पुग्यो। त्यसपछि ओली माओवादीप्रति झनै आक्रामक बन्न पुगे। दुई चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा एमाले पहिलो दल बनेपछि एमालेको दम्भ झन् बढ्यो। तर दुई नम्बर प्रदेशको चुनावमा एमाले भन्दा माओवादी ठूलो दल भएपछि दुई दलबीच प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा तालमेल गर्ने चर्चा चलेको थियो। तर वातावरण यस्तो बन्यो कि चुनावी तालमेल मात्र नभएर वाम एकता नै गर्ने सहमति भयो।
कसरी सम्भव हुन्छ वाम एकता ?
एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता कठिन विषय हो। विगतका राजनैतिक घटनाक्रम हेर्दा एकताको प्रयास प्रचण्डको राजनैतिक चालबाजी हो । केपी ओलीलाई धोका दिएर कांग्रेससँग लपक्कै हुन पुगेका प्रचण्ड फेरि कांग्रेसलाई धोका दिएर उनै ओलीसँग टाँसिन आएका छन् । नेपालको राजनीतिमा चमत्कार गर्दै आएका प्रचण्डको यो कुटिल कदमले एमालेसँग एकताको लोभ देखाएर माओवादीले धेरै सिट प्राप्त गर्ने मौका पाएको छ। प्रचण्डले एमाले नेताहरुलाई इमोशनल ब्लाकमेल गर्दै वाम एकताको कुरा उठाएर फाइदा लिने चाल चालेका छन् जसमा उनी केही हदसम्म सफल पनि देखिएका छन्।
६० स्थानमा माओवादीलाई एमालेको समर्थन प्राप्त हुने हुँदा उसलाई चुनाव जित्न सजिलो हुनेछ । प्रत्यक्षतर्फ ४ सिटमात्र जित्ने आंकलन गरेका प्रचण्डको लागि यो निकै ठूलो फाइदा हो ।
एमाले र माओवादीबीचको सहमति अनुसार दुई दलबीच ६०/४० को भागवण्डा हुँदैछ। जुन माओवादीका लागि ‘बम्पर उपहार’ हो। स्रोतका अनुसार माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले दुई नम्बर प्रदेशको निर्वाचन परिणामा आएपछि आगामी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ बढीमा ६ सिट र समानुपातिमा १० सिटमात्र आउने आँकलन गरेका थिए। ‘प्रत्यक्षतर्फ केही सीमित नेताले बढीमा चार सिट र समानुपातिकतर्फ बढीमा दश सिट आउने उहाँ (प्रचण्ड) को आँकलन थियो,’ एक नेताले भने, ‘प्रतिनिधिसभामा दुवै निर्वाचन प्रणालीतर्फ गरेर संघीय समाजवादी फोरमकै हाराहारीको शक्ति बन्ने देखेपछि प्रचण्डजीले वाम एकताको ललिपप देखाएर एमालेलाई फसाउनु भयो।’
प्रचण्डकै आँकलन अनुसार माओवादीले बढीमा १६ सिट मात्र जित्ने भएपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा माओवादीको प्रभाव कम हुने निश्चित थियो। अब दुई दलबीच भएको सहमति अनुसार प्रत्यक्षतर्फ माओवादीले ४० प्रतिशत स्थानमा आफ्ना उम्मेदवार उठाउन पाउनेछ । यो भनेको कूल १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये झण्डै ६० स्थान माओवादीले पाउनु हो । यी ६० स्थानमा माओवादीलाई एमालेको समर्थन प्राप्त हुने हुँदा उसलाई चुनाव जित्न सजिलो हुनेछ । प्रत्यक्षतर्फ ४ सिटमात्र जित्ने आंकलन गरेका प्रचण्डको लागि यो निकै ठूलो फाइदा हो र उनले यही फाइदाको लागि एमालेलाई फसाएका हुन् ।
एमालेसँग मिलेर पनि हारिने स्थानमा एमालेका उम्मेदवार तर जित्ने स्थानमा माओवादी उम्मेदवार उठाउने प्रचण्डको कुटिल रणनीति छ ।
अर्कोतर्फ समानुपातिकमा समेत एमालेकै समर्थनमा निर्वाचनमा जाने हुँदा प्रत्यक्षमा एमालेका उम्मेदवार नउठी आफ्ना उम्मेदवार उठेको स्थानबाट माओवादीले एमालेको मत पनि पाउन सक्छ । जसका कारण समानुपातिकमा पनि माओवादीले राम्रै सिट संख्या ल्याउन सक्छ। अहिले माओवादीले आफूले ६६ सिट पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ। ती ६६ स्थानमा पनि माओवादीले एमाले र माओवादी मिल्दा जित्ने ठाउँमा मात्र आफ्ना उम्मेद्वार उठाउने प्रस्ताव गरेको स्रोतले जनाएको छ। अर्थात एमालेसँग मिलेर पनि हारिने स्थानमा एमालेका उम्मेदवार तर जित्ने स्थानमा माओवादी उम्मेदवार उठाउने प्रचण्डको कुटिल रणनीति छ । जसबाट हार्ने ठाउँमा एमाले हार्नेछ र एमाले सानो हुँदै जानेछ भने जित्ने ठाउँमा माओवादीले जित्दै ठूलो शक्ति बन्दै जानेछ ।
केपी ओलीले भनेजस्तै खहरे खोला बन्न पुगेको माओवादीको गिर्दो साखलाई एमालेको जगमा अड्याएर आफ्नो डुब्न लागेको राजनैतिक करिअरलाई बलियो बनाउने प्रचण्डको रणनीतिमा एमाले फस्दै छ । खुला राजनीतिमा आएपछि अहिलेसम्म प्रचण्ड शक्तिकेन्द्रको रुपमा रहेका छन् । उनी सत्तामा हुँदा वा नहुँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि मुलुकको राजनीति उनकै वरिपरि घुमिरहेको छ । तर, पछिल्लो स्थानीय निर्वाचनको परिणामले यो अवस्था अब नरहने संकेत गरिसकेको छ । स्थानीय निर्वाचनको परिणामले अब आफू शक्तिहीन बन्ने संकेत देखेका प्रचण्डले सत्ता साझेदार कांग्रेसलाई धोका दिँदै एमालेको बुइ चढेर अर्को ५ वर्ष सत्ता र शक्तिमा हालीमुहाली गर्ने कुटिल रणनीति बनाएका छन् । यो रणनीति सफल भएमा शक्तिहीन हुन लागेका प्रचण्ड अर्को ५ वर्ष देशमा राजनैतिक शक्तिकेन्द्रका रुपमा स्थापित हुनेछन् ।
एमालेलाई भावनात्मक ब्ल्याकमेल!
दुई नम्बर प्रदेशको निर्वाचनपछि निरास बनेको एमाले जसरी पनि माओवादीलाई कांग्रेसबाट अलग गरेर आफ्नो पक्षमा ल्याउन चाहन्थ्यो। माओवादी र कांग्रेस मिलेर चुनावमा जाँदा आफू ठूलो दल बन्ने संभावना नरहने निष्कर्ष निकालेको एमालेले माओवादीसँग चुनावी तालमेल गर्नु उपयुक्त ठानेको थियो। तर प्रचण्डले वाम एकता नै गर्ने प्रस्ताव गरेपछि एमाले हौसिएको हो। माओवादी पनि कांग्रेससँगको तालमेलबाट सन्तुष्ट थिएन। दुई नम्बर प्रदेशमा कांग्रेससँग तालमेल गर्ने माओवादीको प्रस्ताव कांग्रेसले नमानेपछि कांग्रेसले माओवादीलाई उपयोग मात्र गरेको निष्कर्षमा प्रचण्ड पुगेका थिए। आफूलाई चाहिँदामात्र माओवादीको साथ खोज्ने कांग्रेसको व्यवहारबाट दिक्क प्रचण्डले कांग्रेसको साथ छोड्दै एमालेसँग तालमेल गर्न पुगे।
चुनावसम्म बाम एकताको हल्ला मच्चाएर चुनावमा शक्ति आर्जन गर्ने र त्यसपछि फेरि ओलीलाई धोका दिएर बाम एकता नगर्ने प्रचण्डको योजना छ ।
तत्काल चुनावी तालमेल गर्दै वाम एकता गर्ने तीन दलबीच सहमति भएपनि चुनाव अगाडि वाम एकता संभव छैन। प्रचण्डकै कारण चुनाव अघि वाम एकता नहुने भएको हो। उनले वाम एकता गर्ने समय नै दिएनन्। यसको सिधा अर्थ के हो भने एमाले र माओवादीबीच वाम तालमेल सम्भव छैन। चुनावमा एमालेसँग तालमेल गरेर आफ्नो पोजिशन मजबुत बनाउने र चुनावपछि जता सत्ताको उपभोग गर्न पाइन्छ उतै जाने प्रचण्डको भित्री योजना रहेको एक नेताले बताए। अर्थात चुनावसम्म बाम एकताको हल्ला मच्चाएर चुनावमा शक्ति आर्जन गर्ने र त्यसपछि फेरि ओलीलाई धोका दिएर बाम एकता नगर्ने प्रचण्डको योजना छ । प्रचण्डले केपी ओलीलाई बहुमतको प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गर्ने, ओली प्रधानमन्त्री रहुन्जेलसम्म आफू पार्टी अध्यक्ष बन्ने प्रस्ताव गरेका छन्। चुनावपछि माधव नेपाललाई राष्ट्रपति बनाएर थन्क्याउने पनि दुई दलबीच सहमति भएको बताइएको छ।
नेपालको राजनीति बाह्य प्रभावरहित हुन सक्दैन। संविधान जारी भएपछि भारतीय नाकाबन्दीपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चीनसँग गरेको पारवहन सन्धि कार्यान्वयनको पक्षमा चीन रहेको छ। ओली सरकार ढलेपछि ओलीले गरेका सन्धि सम्झौता अगाडि बढ्न सकेको छैन। नेपालमा वाम एकता गर्न सकियो भने आफ्नो प्रभाव पनि बढाउन सकिन्छ भन्ने चीनलाई पनि लागेको हुनसक्छ, र चीनकै सहयोगमा वाम एकता भएको हुनसक्छ।